Twitter isebenza njani? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Twitter isebenza njani?
Epreli 27, 2021 0 IiCententarios 250
I-Twitter inempawu ezimangalisayo. Yintoni emisele njengenye yeqonga lonxibelelwano elifunwayo nelisetyenzisiweyo namhlanje.
Abenzi bayo baphuhlise inkqubo, nangona ilula, isebenza kakuhle. Le nkqubo ibizwa ngokuba yi "tweet". Sebenzisa oku, ungahambisa amagama angama-280 okubhaliweyo. Yabelana ngemifanekiso, iividiyo kunye nophando.
Ngeetweets, uya kugcinwa ukwaziswa phantse ngalo mzuzu wokudalwa kweendaba kunye nezihloko "ezizizihloko ezihamba phambili" kwihlabathi liphela.
I-Twitter njengesixhobo sonxibelelwano
Kwelinye icala, umlandeli kunye nendlela elandelwayo, inethiwekhi ikugcina unxibelelana ngokuthe ngqo nangoko nangoko naliphi na inani labantu. Inani labo eliza kulingana nenani labasebenzisi obalandelayo okanye abakulandelayo kunye neempendulo abazenzayo.
Ke ngoko, ulwazi olupapashwe ngumsebenzisi lunokwabelwana ngamakhulu amawaka kwimizuzwana nje.
Ezi zezinye zezinto ezintle oza kuzifumana kwi-twitter:
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, i-twitter liqonga lonxibelelwano kwangoko:
Ke kunokwenzeka ukuba uyisebenzise ukufezekisa iinjongo ezininzi. Ukuba ungumsebenzisi ofuna ukukhuthaza inkampani esandula ukwenziwa, unokufumana into oyifunayo kwi-twitter.
Ngokubeka uphawu, unokubeka uphawu lwakho kule nethiwekhi. Ngalo msebenzi wolawulo lophawu, ungayenza yaziwe kwihlabathi liphela kwaye unike umbono oqinisekileyo kubasebenzisi.
Ukwabelana ngeflaya, iividiyo kunye neetweets ezijolise ekukhuthazeni uphawu lwakho kunokuba luncedo kakhulu ekukhuleni kweshishini lakho.
Yandisa indawo ohlala kuyo
Kwelinye icala, ngokwenza indawo yabalandeli, wenza amathuba kungekuphela nje ukukhulisa ishishini lakho, Ukuba akunjalo jika iakhawunti yakho ye-twitter ibe yindlela yokwenza ingeniso.
Nangona kunjalo, akukho lula ngokupheleleyo ukwandisa indawo ohlala kuyo yabalandeli. Kuya kufuneka ube nomonde, kodwa usebenzise iindlela zokutsala zomsebenzisi eziya kuxhomekeka kubuchwephesha bakho.
Ukudala ukubetha kunye / okanye ii-tweets ezicetyiswayo, ezinomxholo onomdla wabasebenzisi, kufuneka ibe yenye yeentsika zeakhawunti yakho. Kulunge nokuba wenze isifundo ngezihloko ezithandwayo ngoku.
Uninzi lwezihloko ziphendula indlela yokuphila enomdla, ukuzonwabisa, imidlalo ekwi-Intanethi, ukuthengisa, phakathi kwabanye abaninzi.
Nokuba sithini na isicwangciso sakho, ukuba uyakwazi ukwandisa inani labalandeli bakho ngetratospheric, uya kuba nakho ukutsala umdla weempawu ezifuna ukuba ubakhuthaze.
Kwiwebhu uyakufumana amaphepha aliqela aya kukuhlawula nge-tweet nganye, phakathi kwayo kukho iSocialPubli, iTync, iCobobis okanye iiPapasho.
Ukuba uphuhlisa ibhlog, yabelana ngedilesi yakho kwi-twitter inokukwenza ukuba ufumane utyelelo oluninzi kwaye, ke ngoko, ukugcwala okuphezulu kakhulu kuyo.
Okokugqibela, i-twitter ikwabonelela ngothungelwano olukhulu lobuchwephesha kunxibelelwano. Kukwaziwa nangonxibelelwano. Nge-twitter ungaqala incoko kunye nomdla wobuchule.
Ngokunxibelelana nabantu, oya kukufumana kuluntu olukhulu lwe-twitter, kunokwenzeka ukuba unxibelelane nazo zonke iintlobo zoosomashishini kunye neengcali ezinqwenela ukuseka ubudlelwane beshishini kunye / okanye ukudala amathuba oshishino kwihlabathi liphela.
1 I-Twitter njengesixhobo sonxibelelwano
2 Ezi zezinye zezinto ezintle oza kuzifumana kwi-twitter:
3 Yandisa indawo ohlala kuyo
4 Ezinye iingcebiso
Ungayifumana njani iakhawunti yam ye-Facebook?